Oomasipala benziwa yimimandla yeengingqi eqingqwa yiBhodi yoLwabiwo lweMida yooMasipala (Municipality Demarcation Board). UMphathiswa woRhulumente wezaseKhaya wephondo umisela oomasipala abalawulwa ngamabhunga oomasipala.
Zi-3 iindidi zoomasipala esinazo eMzantsi Afrika, oko kukuthi, abasezidolophini, abezithili, kunye nabezasekhaya. Oomasipala basezidolophiniu okanye abezixeko bakhona kwezona zixeko zikhulu gqitha zisi-8. Imimandla ewa ngaphandle kweedolophu yahlulwe yangoomasipala bezasekhaya. Oomasipala bezithili benziwe baliqela loomasipala bezasekhaya abawa kwisithili esinye. Ngaphandle koomasipala bezithili, bonke oomasipala bahlula-hlulwe baziiwadi.
Ooceba boomasipala banyulwa qho ngeminyaka emihlanu ngethuba lonyulo loorhulumente basekhaya. Uninzi lwabavoti luvotela iqela lezopolitiko ngokusekelwe ekumelweni ngokomlinganiselo wenani elithile yaye umntu umelwa engumntu ngamnye kanye kwiwadi yakhe. Kumabhunga ezasekhaya nawezasezixekweni, ukumelwa ngokwamaqela kwenza ama-50% ooceba benziwa ngqo ngooceba beewadi abanyulwe ngqo. Koomasipala bezasekhaya umvoti ngamnye kwakhona wabelwa amaqela ezopolitiko ngokusekelwe ekumelweni ngokomlinganiselo wamaphepha ovoto. Ama-60% ezihlalo zabelwa ooceba bezasekhaya kuloo mmandla wesithili.
Amabhunga oomasipala avotela isithethi, osebenzisa imigaqo yomthetho. Amabhunga oomasipala kwakhona anyula usodolophu nosekela-sodolophu yena mntu unyula amalungu ebhunga ukuseka ikomiti kasodolophu. Ezinye izigqibo zebhunga kufuneka zenziwe sisininzi ezinye zazo zenziwa yiKomiti kaSodolophu. Ibhunga likamasipala linako kwakhona ukudlulisela imiba kwiKomiti kaSodolophu ukukhawulezisa ukuphunyezwa kwezigqibo. USodolophu unako kwakhona ukwenza izigqibo ezithile ngokuzimeleyo. Uluntu lunelungelo lokuthatha inxaxheba kwizigqibo.